2014 को Belarusians लागि हडताली र स्मरणीय थियो। मई मा मिन्स्क यो वर्ष प्रशंसक दसौं हजार उपस्थित भएको थियो जुन विश्व कप, होस्ट। निस्सन्देह, चिनियाँ घटना unnoticed छोड्न सकिएन र मिन्स्क को केन्द्र एक "बेइजिङ" मा बनाइएको थियो।
औपचारिक, खोल्ने होटल फुटबल को दुनिया मा महत्त्वपूर्ण घटनामा समय सकियो थियो। तर मोहरा मा5ताराहरु स्थिति को आफ्नो उच्च स्तर जोड र स्पष्ट बनाउन।
को "बेइजिङ" कहाँ छ
होटल मिन्स्क मा "बेइजिङ" (ठेगाना:। Str Krasnoarmeyskaya, घर 36) मिन्स्क को कुलीन जिल्लाको एक मा स्थित छ। यो यहाँ छ कि राष्ट्रपति, थिएटर र संग्रहालयहरु को निवास सहित धेरै सरकार एजेन्सीहरू। विशाल पुरानो पार्क हावा विशेष सफा बनाउँछ र यसको सट्टा, होटल मिन्स्क मा "बेइजिङ" शहर को incessant हल्ला गर्ने birdsong आनंद को। नदी embankment Svisloch साथ हरियो बेल्ट मा हिड्ने एक व्यस्त दिन पछि सही विश्राम छन्।
विमान द्वारा शहर पुग्नु गर्नेहरूका लागि, सडक राष्ट्रीय हवाई अड्डा - होटल "पेकिङ" मिन्स्क मा, पनि भने भीड घण्टा मा भीड ट्याक्सी एक घण्टा भन्दा कम लाग्छ छ। रेल द्वारा सेन्ट्रल स्टेशन गर्न विमानस्थलबाट प्राप्त गर्न लैजान थियो समय नै राशि। अझै अक्सर हामी चाहनुहुन्छ रूपमा जाने को बेलारूसी राजधानी मा गाडिहरु - यातायात यो विधि चयन गरेर, यसलाई परिवहन को आन्दोलन को आवृत्ति खातामा लिन आवश्यक छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं तालिका मा आगमन टर्मिनल देखि छोड्दा जो बस, लाग्न सक्छ।
पहिलो पटक भ्रमण गर्ने गरेका छैनन् मिन्स्क पर्यटकहरु, यो खुट्टा मा होटल स्टेशन बाट प्राप्त गर्न सक्षम छ। सामान को अभाव मा 15 मिनेट भन्दा कम लाग्छ हिंड्न। तपाईं पनि ट्राम मा2रोक्दछ ड्राइव वा धेरै ट्याक्सी फाइदा लिन सक्छ। एक भाडा बस हास्यास्पद छ!
तर मेट्रो मा होटल प्राप्त हुनेछ। स्टेशन "मई दिवस" होटल देखि पाँच मात्र सय मीटर छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो अन्य शाखा छ, र स्टेशन जोडिएको छ छैन।
सबैभन्दा स्वागत अतिथि होटल मिन्स्क मा "बेइजिङ" आफ्नो अतिथि व्यवहार रूपमा। " साथै होटल, प्रयास र समय को एक न्यूनतम एक योग्य प्रशासक बताउन खुसी प्राप्त गर्न कसरी।
हाल, होटल यसको अतिथि 180 सहज कोठा प्रदान गर्दछ। यसलाई परिष्कृत पूर्वी युरोपेली शैली विशुद्ध भागहरु को एक अद्वितीय संयोजन प्रतिनिधित्व, एक होटल "पेकिङ" (मिन्स्क) छ जो अन्य यस्तै संस्थाहरू स्तर भित्री देखि distinguishes।
पनि यस होटल को सबै भन्दा सरल कोठा भव्यता र लक्जरी द्वारा विशेषता छ। कोठा आकार मा 38 वर्ग मीटर र क्लासिक काठ फर्नीचर संग सुसज्जित। तकिया शीर्ष गद्दा प्रत्येक कोठा को एक अनिवार्य विशेषता छ। बाथरूम शवर केबिन संग सुसज्जित छ, शीतल स्नान र चप्पल प्रत्येक अतिथि कक्ष पर्खिरहेका छन्।
इच्छित, अतिथि मिनी पल्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने, खुशबूदार चिया वा बलियो कफी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। सुरक्षित तपाईं कागजातहरू को सुरक्षा चिन्ता छैन गर्न अनुमति दिन्छ, र एयर कंडीशनर एक सुखद ठंडक पनि गर्म र बेहवा गर्मी रात कायम हुनेछ। यस्तो कोठामा बस्दा लागत प्रति दिन2लाख rubles छ।
होटल "बेइजिङ" मिन्स्क मा आफ्नो ग्राहकहरु को आराम ठूलो महत्त्व संलग्न गर्दछ। कोठा "डिलक्स" राम्रो सहज र स्टाइलिश फर्नीचर संग सुसज्जित, र आकार मानक धेरै उच्च छ। होटल अतिथि - एक सुरक्षित, वातानुकूलन, मिनी पल्ट, कार्य क्षेत्र, उपग्रह टीवी। राम्रो बोनस रूपमा - कोठा मा उपस्थिति पानी पिउने। इन्टरनेट प्रयोग समावेश गरिएको छ।
व्यापार मान्छे होटल "बेइजिङ" द्वारा प्रदान सेवाहरू प्रयोग गर्न खुसी छन्। मिन्स्क अक्सर सम्मेलन, symposia र सेमिनार को एक किसिम को लागि एक स्थल रूपमा सेवा गर्दैछन्। आफ्नो समय र सान्त्वना मोल गर्ने व्यवसायी लागि, होटल एक मिनेट सामान्य मानक दिनुभएन अप लागि अनुमति दिने, सबै भन्दा राम्रो अवस्था प्रदान गर्दछ। कोठा श्रेणी "व्यापार" 50 ठूलो भन्दा वर्ग मीटर, जो एक विशाल आरामदायक बेड र एक कार्य क्षेत्र फिट गर्न सक्छन्, तपाईं आराम आराम र व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ। चिया स्टेशन सम्भव त्यहाँ पट्टी वा रेस्टुरेन्ट तल जान कुनै इच्छा छ भने, एक स्वादिष्ट पेय तयार बनाउँछ।
यी कोठा व्यापार मान्छे र यात्री जस्तै मांग गर्दै छन्। साँच्चै, एक डबल कोठा मा, पनि एक ठूलो परिवार परिचित सान्त्वना संग रहन सक्छ। अलग बेडरूम र कार्यालय भएको घरेलू सदस्यहरू काम र आराम समयमा प्रत्येक अन्य हस्तक्षेप छैन अनुमति दिन्छ। हाडजोर्नी गद्दा आकार संग राजा आकार बेड सडक देखि पैदल दूरी धेरै जो को बेलारूसी राजधानी, जहाँ होटल "बेइजिङ" मिन्स्क मा स्थित छ को पर्यटन को एक दिन पछि स्वतन्त्रित निद्रामा सुनिश्चित गर्दछ। यी सुन्दर ठाउँका तस्बिर यस युरोपेली शहर को सबै सौन्दर्य दिनेछु, र बेलारुस को राजधानी मा आफ्नो रहन को स्मृति सुरक्षित गर्नेछ।
कार्यकारी र राष्ट्रपति सुइट्स
यी नम्बर कुलीन वर्ग भन्छौँ। कार्यकारी सुइट तीन कोठा हुन्छन् र माथि 87 वर्ग मीटर गर्न एक क्षेत्र। मीटर। यहाँ सबै कार्यक्षमता र सान्त्वना मोल गर्ने मान्छे को रहन को लागि बनाएको छ। अध्ययन कोठा आरामदायी फर्नीचर संग सुसज्जित र बैठक कोठा व्यापार कुराकानीमा सबै सहभागीहरू समायोजित हुनेछ। उत्कृष्ट soundproofing कोठा बेडरूम, पनि slightest हल्ला मा भित्र पस्नु गर्न अनुमति छैन। दिन 7.25 लाख rubles यो स्तर लागत मा कोठा रहनुहोस्।
होटल "बेइजिङ" मिन्स्क मा पनि राष्ट्रपति सुइट अतिथि आवास प्रदान गर्न खुसी हुनुहुन्छ। उच्च छत, फ्रान्सेली Windows, सुरुचिपूर्ण सामान यसको अतिथि एक अविस्मरणीय अनुभव ग्यारेन्टी। दुई बेडरूम भइरहेको यो उपयुक्त भएको डेलिगेसन वा ठूलो परिवार समायोजित बनाउँदै। मा राष्ट्रपति सुइट खर्च एक दिन को लागत 26 लाख rubles छ।
रेस्टुरेन्ट र कैफे
को विशेष व्यञ्जन आनन्द चिनियाँ भोजन गर्न सक्छन् रेस्टुरेन्ट मा "ऋतु" आगंतुकों। होटल मिन्स्क मा "बेइजिङ", जहाँ रेस्टुरेन्ट आफ्नो आगंतुकों मारा भनेर सम्भव सबै गरिरहेको छ। एक विशेष नुस्खा लागि सस मा पेकिङ धुनमा, माछा र समुद्री भोजन, मिन्स्क को केन्द्र तयार, स्वाद मध्य राज्य मा तयार भाँडा देखि अप्रभेद्य छ। को गर्मी मा तपाईं पाल मा एक उत्कृष्ट खाने राम्रो बाहिर प्राप्त गर्न सक्छन्।
जो परम्परागत रूसी र बेलारुसी भोजन भेटी, होटल गरेको रेस्टुरेन्ट, "शैली" को दोस्रो तल्ला मा, एक थप परिचित व्यञ्जन रुचि ती लागि।
नास्ता "बुफे" "ओएसिस" सेवा छ क्याफे मा। दिन को समयमा, यो पनि युरोपेली भोजन प्रदान गर्दछ। कफी वा ककटेल एक कप होटल लबी बारमा हुन सक्छ।
तपाईंको व्यापार आवश्यकता को लागि, कुनै पनि समयमा सभा वा वार्ता लागि कोठा दिइएको गर्न सकिन्छ। पाँचवटा सम्मेलन कोठा प्रत्येक वक्ता, वायरलेस माइक्रोफोन, परियोजना, फ्लिप चार्ट संग स्क्रीन संग सुसज्जित छ।
प्राप्त ऊर्जा बढावा उत्कृष्ट सुसज्जित गर्न सकिन्छ फिटनेस केन्द्र देखि 8 AM 10 बजे दिनहुँ खुला छ। को जिम निःशुल्क प्रयोग, स्विमिंग पूल, सना, जैकुजी - होटल अतिथिहरू।
व्यावसायिक चिनियाँ masseurs चिनियाँ निको सहित विभिन्न मसाज, प्रस्ताव। बेलारुस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी यस्तो सेवा गर्न लाइसेन्स।
होटल को कोठा कसरी बुक गर्न?
आधिकारिक वेब साइट तपाईं आफ्नो पृष्ठ सिधै बुक गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं प्रकार र booking.com आरक्षण प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पनि होटल मिन्स्क मा "बेइजिङ", 375 17 329 77 77 फ्याक्स गरेर आवेदन स्वीकार जो फोन।
होटल को उमेर मात्र एक वर्ष बारेमा छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यसको कर्मचारी आफ्नो अतिथि को कुनै पनि इच्छा पूरा र "बेइजिङ" सहज र स्मरणीय मा आफ्नो रहन बनाउन अनुभव छ।
होटल स्वर्ण कोस्ट Resort र स्पा4* (भियतनाम, Phan Thiet): फोटो र समीक्षा
Karolina होटल4* (बुल्गारिया / सनी बीच): समीक्षा र फोटो turitsov
कि छाया बढ्न सुन्दर बारहमासी फूल
चिनियाँ Oolong टी
नेटवर्क मार्केटिङ, यसको मुख्य लाभ।